Shiinaha warshadda gawaarida qaada buundada 37m oo hal mitir iyo alaabada iibiya | Changyuan
1) Dhexroor ballaadhan oo ballaadhan oo ballaadhan oo ballaadhan, oo miisaankoodu yar yahay oo iftiin miisaankiisu yahay, ayaa caan ku ah xawaaraha sare ee jawaabteeda iyo hoos u dhaca awoodda.
2) Jiilka cusub ee nidaamka xakamaynta elektiroonigga, oo qaadanaya tikniyoolajiyadda korantada tamarta, waa mid aamin ah oo la isku halleyn karo isla markaana ku raaxeysanaya joogteyn sare. Isticmaalka shidaalka inta lagu gudajiro bamgareynta la taaban karo waa qiyaastii 0.5L / m3
3) Qaadashada nidaamka isku-baarista ciladaha, basaska CAN iyo codsiyada xakamaynta qaaska ah waxay hubinayaan in hawlwadeenku uu heli karo macluumaadka cilada isla markaana uu xaliyo dhibaatada waqtiga, isagoo si weyn u hagaajinaya isku halaynta nidaamka korantada.
Jawaabtaada ku jawaab 12 saacadood oo shaqo gudahood;
Shaqaalaha khibradda leh ayaa kaaga jawaabaya su'aalahaaga oo dhan;
Naqshadeynta macaamiisha ayaa loo heli karaa alaabada qaarkood (OEM);
U tudhida qaybaha noocyada mashiinnada mashiinka leh qiimo macquul ah;
Noocyada kala duwan ee tareenka trailer waxaa lagu bixin karaa qiimo tartan ah.
Waxaan sidoo kale bixinnaa alaabo dheeri ah (asal ahaan, OEM, iyo beddelaad) dhammaan noocyada gawaarida waaweyn iyo tareennada gawaarida tayada leh oo tayo fiican leh si loo hubiyo in gawaarida iyo tareeyeyaasha ay ku jiraan xaalad shaqo oo wanaagsan.
1. Tiknoolajiyadda qaab dhismeedka koboc sare oo horumarsan
2. Teknoolojiyadda tuubbooyinka tuubbooyinka korontada ku shaqeeya oo tayo sare leh
3. Teknolojiyad qaab dhismeed adag oo xasilloon
4. Teknolojiyad xasilloon oo deggan oo xasilloon
5. Teknolojiyad koronto oo si buuxda loogu kalsoonaan karo
6. Teknolojiyada nidaamka dareeraha ee hoos u dhaca cadaadiska aadka u hooseeya
7. Teknolojiyad kontorool koronto oo aamin ah oo caqli badan
S: Waa maxay alaabooyinkaaga ugu muhiimsan?
A: Bamka culus ee saaran mashiinka xamuulka qaada, Rakaabka matoorka adag
S: Waa sidee tayada wax soo saarkaagu?
A: Waxaan haysanaa in kabadan 10 sano oo ah hagaajinta khibradaha mashiinada la taaban karo. Marka loo eego heerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ahba, dhammaan mashiinnadayada waxaa baaray oo si taxaddar leh oo taxaddar leh u leh hawl-wadeennadayada xirfad leh, waxaan tijaabin doonnaa qalab kasta ilaa uu sifiican uga shaqeynayo ka hor bixinta. Waxaan dammaanad ka qaadaynaa in mashiin kasta oo aan u gaarsiinno macaamiisheenna ay ku jiraan waxqabad wanaagsan oo tayo sare leh
S: Waa sidee qiimaha?
A: Waxaan ku takhasustay dib-u-habeynta mashiinnada la taaban karo, waxaanna haysannaa macaamiil fara badan adduunka oo dhanna ugu qiimaynaya qiimaha ugu fiican, waxaan ku siin karnaa qiimo hoose sababta oo ah ilahayaga koowaad.
S: Ma bixin doontaa adeegga iibinta kadib?
A: Haa. Dammaanadda mashiinnadayada cusub waa 12 bilood, kuwa la isticmaalayna waa 1 bil, marka laga reebo inaan haysanno koox adeegga adeegga iibinta ka dib si loo xalliyo dhibaatooyinkaaga si dhakhso leh oo dhakhso leh.
Moodel ： NJ52261THB37 Halbeega Farsamada Moodel ： Halbeega Farsamada
Qalabka paramete-rs dhererka buuxa 10250mm Nidaamka 'pumpi-ng param-eters' Barakaca la taaban karo ee la taaban karo
Dhererka guud 3720mm cadaadis sareeya 83m3/ h
Miisaanka qofka 22600Kg cadaadis sareeya 12 MPa
Qaabka wadista 4 × 2 cadaadis sareeya 23
nooca mashiinka Yuchai Foomka waalka qaybinta S 阀
Awoodda soosaarka / xawaaraha 199 / 2300RPM Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 230 / 1550mm
Cabbirka tareenka 12.00 R20 Muuqaalka Hopper 0.5m3
Wheelbase 5200 / 5000mm Dhererka quudinta 1450mm
Lugta lugta cagaarshow-rs Dhumuc toosan 37m Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
Dhererka toosan siman 33.2m Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Qoto dheer oo toosan 22m Isku-darka sibidhka 160-220mm
dherer 6200mm Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
dherer 6100mm Habka nadiifinta biibiile Dhaq
dherer 6700mm Summadaha Qalabka wareejinta kiiska Jarmalka Spor / Zhejiang
dherer 6700mm Bamka bullaacadda Jarmalka Rexroth
Jooji gudbinta tuubada dherer 3m Bamka matoorka Jarmalka Rexroth
Qaabka furfuridda Lugta hore Nooca X Kontoroolka fog HBC / ohm, iwm.
Hore: 33 mitir bam-gacmeed
Xiga: 38 mitir taraafikada la taaban karo